578s Ubomi boCwangco ngaphakathi kwiMiami Mega Jail images and subtitles
Utyholwe ngolwaphulo-mthetho olubi olunyanzelisa ukuba ungazenzi. Awumsulwa kude kungqina ukuba unetyala, kodwa loo mhla wenkundla unokuthatha ixesha fika. Okwangoku indawo yakho yokuhlala iya kuba yinto ebizwa ngokuba yiMiami Mega Jail. Usemncinci, awukaze uhlale ejele ngaphambili kwaye awuyonto inzima, ngoko ke usiwe kumgangatho apho uza kufakwa khona awuyikholelwa into oyibonayo. Imigca yeeseli ezele ngamadoda, ukukhwaza, ukukhwaza, ukuza kwizibalo kwaye usongele wena. Luhlobo lweziphithiphithi. Ukulinda kwisisele sakho yikomiti yokwamkela yamadoda angama-20 anomsindo, onobungozi. Awufanelani naba bantu, kodwa kuya kufuneka ulwe, ungenzi mpazamo malunga ukuba. Ungene nje kwibala lokulwa nabantu. Kunzima ukukhetha ukuba yeyiphi eyona ntolongo yeyona nto ibambekayo e-USA kuba ngelishwa kukho ezininzi Iindawo ezinokukhuphisana ukuba zezona ziphambili, okanye mhlawumbi kufuneka sithi ezantsi, kuluhlu. Nabani na ohleli kwindawo esiya kuthetha ngayo namhlanje akasayi kukhutyekiswa siyikhethe njengeyona imbi kakhulu, oko ngokuqinisekileyo. Kuya kufuneka sithi xa uthetha nezaphuli-mthetho ezilukhuni ezingenileyo nezaphumayo ejele Iijele zihlala zikuxelela ukuba intolongo imbi kakhulu. Uninzi lwabantu luthi intolongo yinto yokuzila kunejele kwaye inogonyamelo ngakumbi. Indawo esithetha ngayo namhlanje ibizwa ngokuba "sisihogo eParadesi", nasemva kwayo uphando lwethu asizukuvuma. Eyona nto sithetha ngayo ibizwa ngokuba yi "Miami-Dade Corrections and Regency Regency" Isebe ”, enezinto ezininzi ezibandakanya iNkampu yeBoot engaziwayo. Abo bangagqithiyo kule nkampu bayokugqibela entolongweni, kwaye abanye babo basekhona ekukhuleni kwabo. Inkampu yeBoot lelinye ibali xa lilonke, kodwa siya kuthi xa kuthelekiswa nentolongo inkampu yeholide. Yonke le nkqubo ihlala abantu abamalunga nama-7,000, nangona kukho into efana ne-114,000 yabantu Dlula kwiingcango unyaka ngamnye-oko kukuthi malunga ne-312 ngosuku. Le yindawo exakekileyo, oko ngokuqinisekileyo. Okwangoku, yinkqubo yesixhenxe enkulu kakhulu e-United States. Uninzi lwebanjwa alizukuchitha ixesha elide apho kunye nexesha eliqhelekileyo lichithwe kwinkqubo yonke ziintsuku ezingama-22 kuphela, kodwa uya kufumana abantu esele belinde ukuxoxwa kwetyala ixesha elide iminyaka emihlanu. Oku kusizisa kwenye yezona yunithi ziphambili, eyona ndawo iphambili kwezi zihloko kwiimeko zayo zempatho-mbi. Ibizwa ngokuba liZiko lokuGcinwa liTyala ngaphambi kwexesha, okanye ngamanye amaxesha libizwa ngokuba yi-Main Jail. Ihlala ihlala malunga nabantu abayi-1,700 ngexesha. Uninzi lwabantu abalapho basesebuchwephesha ubuchwephesha oko kuba bengakhange bangqine unetyala, kodwa ukulinda loo mhla wenkundla kungathatha iminyaka. Akulula ukuzinza xa ulolu hlobo lwe-limbo, kwaye ukuba uhamba ngaphaya kweeseli ezinye imigangatho uzakubona nje ukuba izinto azicwangciswanga. Kukho amabanjwa athe ayeka nokulwa amatyala awo kuba efuna ukufumana ngaphandle, abamsulwa okanye hayi, bafuna nje ukuya entolongweni. Amagumbi amabi kakhulu kulapho abona bantu banetyala eliyingozi bagcinwa khona kwaye bakhona imigangatho emihlanu nesithandathu. Iiseli apha zihlala naphi na ukusuka kwi-15 ukuya kwi-25 yamadoda kwaye ngaphakathi kweli qela kukho luhlobo lwabalawuli. Njengabafana balapha bathanda ukuthetha kakhulu, kuyasinda kwezona zilungileyo, ke ukuba awukho umlo usenokuba nobunzima. Ufuna ibhedi ethile, kuya kufuneka uyilwele. Kulungile, awukhathali malunga nokuba yeyona ndawo imbi kakhulu esiseleni, kodwa uza kuthini ukuba umntu nje ithatha izinto zakho? Njengoko elinye ibanjwa lathi, "Ndixhaphaza ababuthathaka." Ukuba awuzilweli izinto zakho uya kuba nesihogo sexesha, kwaye oko kuthetha ukuba ezingalunganga. Ukuba uyahlwaywa, uyakubethwa naphina apho uya khona ngaphandle kokokuba ukhuselekile. Njengoko elinye ibanjwa lithe kudliwanondlebe kusuku lwakho lokuqala kwisisele sakho kuya kufuneka ukuba ulwe kuba bafuna ukukujonga njengendoda. Kodwa kutheni? Impendulo yakhe ibikukuba awulwi luphawu lokuba kukho into ephosakeleyo ngawe. Mhlawumbi usisithukuthezi, kuba ubungafuni kulwa. Kuyavakala ukuba ayinangqondo, kodwa ibanjwa lathi le yimigaqo, yile khowudi. Into yile, amabanjwa akanakuze ayicacisa gca imigaqo yekhowudi. Omnye umntu uchaze ukuba ukuba umntu akabalwi aba- nye emva kokuthobela i ikhowudi iseli yonke inokubetha loo mntu. Ngamanye amaxesha umntu unokubhaqwa ngenxa yesiphosiso esincinci, kwaye ngamanye amaxesha angabakho otyholwa ngento angayenzanga. "Ubani ubiwe ukutya kwam?" Akukho mntu uphendulayo, kwaye obuthathaka uthatha ukubetha. Awunamandla, uthatha ityala. Kwakufuneka ayenzile, kuba uyakuphulukana nobuso ukuba akakwenzi. Njengoko wonke umntu esitsho apha, kufuneka ulwe umva. Banemigaqo emininzi engabhalwanga abayamkelayo, kwaye enye ibizwa ngokuba yi-GABOS. Oko kuthetha ukuba, "Umdlalo awusekelwanga kwi-Sympathy". Ngokungafaniyo nezinye iintolongo zombuso, akunakwenzeka ukuba uya kuthathwa phantsi kwephiko lomntu. I-Jail yindlela yokugcwala ngaphezulu kunejele, nangona siva kancinci malunga nokuba krwada iinkqubo zejele. Yiya nje kwiiforamu apho ababesakuba ngamabanjwa bathetha ngamava abo kwizilungiso Inkqubo kwaye uya kufumana uninzi lwabo bathi intolongo yayiyimbi ngakumbi. Isithukuthezi yile yokuba uninzi lwabantu alukafunyanwa linetyala, kwaye ke bayanyangwa mbi kwaye ujongane nezisongelo ezingakumbi. Amaxesha okuqala oyika ngokupheleleyo kwaye kwiimeko ezininzi kufuneka abe; ngengqondo Thumela umthwalo ongalunganga apho; ukutya kukubi; iiseli zingcolile kwaye ziya kuchitha uninzi yexesha labo kwisisele. Ungafumana amabanjwa amaninzi esithi azakwenza “iibhulethini” ukuze aphume kuloo nto isihogo. Imbumbulu ngunyaka ejele. Kutheni iijele zisekhaya kwiimeko ezimbi kakhulu, unokuzibuza. Ewe, abenzelwanga ukuba bagcine umntu ixesha elide. Ingxaki kukuba, nokuba yinqanaba elifutshane kunokubhengeza kwaye abanye abantu benze okungaphezulu kakhulu kuno-a ukuhlala ixesha elifutshane ukuba ityala labo lilibazisekile. Intolongo imele ukunika uhlobo oluthile lwentuthuzelo… Intolongo isisihogo esinezibonelelo, ijele liva iintlungu ezingapheliyo kwiprigatoriyo kunye neyona ndawo imbi awuyazi indlela yokuphuma. Ngenxa yalonto, amabanjwa ahlala enoburharha, kwaye enomsindo, kwaye ekhathazekile, kwaye ngamanye amaxesha nje icace gwenxa emva kokuba ibenesikhuhli-kwi-nyanga eyi-18. Yonke lento uyithethayo, khawufane ucinge ukuba uthunyelwe kwelona xesha limbi kwezi ndawo? Masibuyele kuwe sithathelwa phezulu kumgangatho we-6 eMiami. Xa sele esiseleni unogada uhamba, kwaye abo nogada bavumile ukuba abanakuphendula kugonyamelo ngokukhawuleza ukuba luyeke. Bavumile ukuba babashiya amabanjwa ukuya kwiikhowudi zabo. Abo bagadi bathi akukho nto banokuyenza kukubethwa kanobom, i ukugwaza, ubusela. Akwanelanga ukuba babe kuyo yonke indawo kwaye babone yonke into. Nje ukuba umgadi ahambe, ushiywe ukuba uyokulwa kumgangatho wesi-5 nowesi-6 esi sakhiwo sikhohlakeleyo sidala. Kodwa kutheni? Kutheni le nto bengavani nje? Elinye ibanjwa laphendula lathi, "Ikhowudi yikhowudi." Ithetha ntoni le nto? Kuthetha ukuba ubonwa ungamhloniphi umntu olwayo, ubopha imitya. Awuqiqi nomntu kuba le ayisiyondawo efanelekileyo yokuqala. Abantu abangahlali ezitalatweni, bathi, abayiqondi ikhowudi yezitrato. Olu hlobo lwasentshonalanga lwasentshona lubuyela kwinto abayibiza ngokuba "yinkcubeko." Ngembeko. ” Uyamhlazisa umntu obhinqileyo, uyalwa, urhola amakrele, uthabatha izithuba ezilishumi kwaye udubula. Kwilizwe langaphandle siphume sivela koku uninzi, kodwa ngaphakathi ejele Le khowudi, le nkcubeko yokuhlonipha, isasazekile. Ngaphezulu kobusela kunye nokulwa neJail Jail eyintloko eMiami ebizwa ngokuba yenye yezona zimbi eMelika zezolunye uhlobo lokuphathwa gadalala kwamadoda-kwindoda. Izinto ezoyikisayo zinokwenzeka xa abalindi bejikeleza iiseli kube kanye ngeyure. Amabanjwa angabom ashiywe njengamaxhoba phakathi kwabarhanisi. Ngombulelo, ijele lenze utshintsho oluninzi kule minyaka imbalwa idlulileyo, enye kakhulu kufakwe iikhamera. Ke kukho umba wale ndlu yasejele abantu abaninzi abathatha iziyobisi ngengqondo. Amabanjwa alwa ngokuxhaphakileyo xa umntu ogula ngengqondo esenza izinto ezibanjwa ngamanye amabanjwa andithandi. Njengoko iProjekthi kaMarshall inike ingxelo, "Inkqubo yaseMiami yejele lelona ziko likhulu Abantu abagula ngengqondo eFlorida. ” Abantu abagula ngengqondo bahlala bexhoba, kwaye baphelela phantsi ngamadoda angama-20 athabatha ujika ubambe. Yindlela yokunyanga ukuphathwa ngayo. Ngalo naluphi na usuku umntu angena kwaye aphuma kwizigulana. Kufana nomnyango ojikelezayo othe tyaba-gazi. Ngapha koko, kuye kwakho ubundlobongela obuninzi kangangokuba iSebe lezoBulungisa lathi iMiami-Dade Inkqubo yentolongo yayiphuma kulawulo kwaye amabanjwa ngokunjalo nabalindi bajongana neengozi ezininzi kakhulu. Kukho into ekufuneka yenziwe, utshilo isebe. Kwiminyaka embalwa ebuyayo ejele yajongwa kakhulu emva kokuba abantu abasibhozo besweleke kwiinyanga nje ezintlanu. I-DoJ ithe ukubulawa kwabantu abathathu abangafundanga ngengqondo kuyaphazamisa. Omnye umntu owayeqhuba etshayisa ngomnye wangena ngomgqibelo wabe efile olandelayo UMvulo. Ababini ngaphezulu basweleke kwiveki, kunye nekhomishini ethi le nkqubo “yaphuke kakhulu.” Kwaye kwafumanisa ukuba ukusuka kwabasibhozo ababhubhileyo sele etsiyile indawo yokubaleka amabanjwa eza emva kwakhe eza kumbetha. Izikhuni zazikhankanyiwe. Owona mgangatho umbi kakhulu, owawuvaliwe, ngamanye amaxesha wawubizwa ngokuba nguMgangatho oLityelweyo. Yayikwinqanaba lesithoba apho uninzi lwabantu abagula ngengqondo babegcinwe khona. Kulapho amabanjwa ayehlala eshiywe kwaye engakhathalelwanga, kwaye kwiimeko ezininzi kakhulu ubomi bakho. Emva kwemini kweli nqanaba amabanjwa ayelala phantsi ngaphandle kweengubo, nangona kunjalo indawo yokufumana isifo sengqondo. Amanye amabanjwa afunyanwa esela kwizindlu zangasese, kwaye xa oku kufikile ezindabeni yabizwa, "yoyikeka". Kwakukho isikhalo sasesidlangalaleni. Kodwa njengoko uvile, kusekho iingxaki xa umntu onengxaki yengqondo etshixiwe Abantu abakhulayo esitratweni banamhlanje nabanezigebenga ezinekhowudi ezingenabuntu. Ayisiyo yonke imigangatho emibi njengamabali esiye sathetha ngawo, kwaye kwezinye iimeko ikakhulu abantu abanobungozi okanye abasesichengeni baya kuhlala yedwa. Nangona kunjalo, sigqibe kwelinye lala magumbi aphezulu kwijele enkulu kwaye uya kubona kunjani ukuvalelwa kwenye yeentolongo ezinamandla emhlabeni. Kukho ezinye iingxaki, nazo, ze-ilk engaqhelekanga. Ngo-2019, abantu abayi-17 basiwa esibhedlele kule ndawo ngenxa yokugula ngesiquphe. Iqela labasebenzi lehle nalo, nalo. Kwenzekentoni? Akukho mntu waziyo ngokwenene. Iqela lebhombu lada labizwa emva kokuba kufunyenwe ulwelo olungaqhelekanga, kodwa lwajika ukungabi nabungozi. Esona sizathu siphambili sokuba abantu baqalise ukugxuphuleka yayingumsi wetyhefu iziyobisi. Ukuba ukuphefumla umsi okuvela kude kungamthoba umntu ukuba abe nesicaphucaphu esikhohlakeleyo, yintoni emhlabeni ababenokuthi bayatshaya apho? Ngaba kukho irhasi? Ibonisa nje ukuba injani indawo yendawo. Siza kukushiya ngophononongo esilifumene kwiphepha le-Facebook elinikezelwe kule jele: "Wamkelekile esihogweni. Umntu angangcono xa efile kunokuba anyamezele ukuphathwa gadalala nokuthuthunjiswa kokubanjwa kweli chibi licekeceke. Awufuni ukuthumela kwi-Miami Jail kodwa ufuna ukunqakraza kwenye yezi iividiyo. Ke yiya kubukela le vidiyo ngoku kwenye ividiyo enkulu kwiThe infographics Show okanye le ngaphaya apha. Unokukhetha enye kuphela nangona kunjalo ukhethe ukuya kwenye ividiyo ngoku!
Ubomi boCwangco ngaphakathi kwiMiami Mega Jail
< start="1" dur="4.029"> Utyholwe ngolwaphulo-mthetho olubi olunyanzelisa ukuba ungazenzi. >
< start="5.029" dur="4.521"> Awumsulwa kude kungqina ukuba unetyala, kodwa loo mhla wenkundla unokuthatha ixesha >
< start="9.55" dur="1"> fika. >
< start="10.55" dur="4.18"> Okwangoku indawo yakho yokuhlala iya kuba yinto ebizwa ngokuba yiMiami Mega Jail. >
< start="14.73" dur="3.93"> Usemncinci, awukaze uhlale ejele ngaphambili kwaye awuyonto inzima, ngoko ke >
< start="18.66" dur="3.42"> usiwe kumgangatho apho uza kufakwa khona awuyikholelwa into oyibonayo. >
< start="22.08" dur="5.45"> Imigca yeeseli ezele ngamadoda, ukukhwaza, ukukhwaza, ukuza kwizibalo kwaye usongele >
< start="27.53" dur="1"> wena. >
< start="28.53" dur="1"> Luhlobo lweziphithiphithi. >
< start="29.53" dur="4.32"> Ukulinda kwisisele sakho yikomiti yokwamkela yamadoda angama-20 anomsindo, onobungozi. >
< start="33.85" dur="4.26"> Awufanelani naba bantu, kodwa kuya kufuneka ulwe, ungenzi mpazamo malunga >
< start="38.11" dur="1"> ukuba. >
< start="39.11" dur="2.04"> Ungene nje kwibala lokulwa nabantu. >
< start="41.15" dur="4.83"> Kunzima ukukhetha ukuba yeyiphi eyona ntolongo yeyona nto ibambekayo e-USA kuba ngelishwa kukho ezininzi >
< start="45.98" dur="4.989"> Iindawo ezinokukhuphisana ukuba zezona ziphambili, okanye mhlawumbi kufuneka sithi ezantsi, kuluhlu. >
< start="50.969" dur="3.721"> Nabani na ohleli kwindawo esiya kuthetha ngayo namhlanje akasayi kukhutyekiswa >
< start="54.69" dur="2.869"> siyikhethe njengeyona imbi kakhulu, oko ngokuqinisekileyo. >
< start="57.559" dur="3.631"> Kuya kufuneka sithi xa uthetha nezaphuli-mthetho ezilukhuni ezingenileyo nezaphumayo ejele >
< start="61.19" dur="3.35"> Iijele zihlala zikuxelela ukuba intolongo imbi kakhulu. >
< start="64.54" dur="3.38"> Uninzi lwabantu luthi intolongo yinto yokuzila kunejele kwaye inogonyamelo ngakumbi. >
< start="67.92" dur="3.61"> Indawo esithetha ngayo namhlanje ibizwa ngokuba "sisihogo eParadesi", nasemva kwayo >
< start="71.53" dur="2.62"> uphando lwethu asizukuvuma. >
< start="74.15" dur="4.3"> Eyona nto sithetha ngayo ibizwa ngokuba yi "Miami-Dade Corrections and Regency Regency" >
< start="78.45" dur="4.63"> Isebe ”, enezinto ezininzi ezibandakanya iNkampu yeBoot engaziwayo. >
< start="83.08" dur="3.6"> Abo bangagqithiyo kule nkampu bayokugqibela entolongweni, kwaye abanye babo basekhona >
< start="86.68" dur="1"> ekukhuleni kwabo. >
< start="87.68" dur="4.11"> Inkampu yeBoot lelinye ibali xa lilonke, kodwa siya kuthi xa kuthelekiswa nentolongo >
< start="91.79" dur="1.14"> inkampu yeholide. >
< start="92.93" dur="5.5"> Yonke le nkqubo ihlala abantu abamalunga nama-7,000, nangona kukho into efana ne-114,000 yabantu >
< start="98.43" dur="4.2"> Dlula kwiingcango unyaka ngamnye-oko kukuthi malunga ne-312 ngosuku. >
< start="102.63" dur="2.11"> Le yindawo exakekileyo, oko ngokuqinisekileyo. >
< start="104.74" dur="3.48"> Okwangoku, yinkqubo yesixhenxe enkulu kakhulu e-United States. >
< start="108.22" dur="3.64"> Uninzi lwebanjwa alizukuchitha ixesha elide apho kunye nexesha eliqhelekileyo lichithwe kwinkqubo yonke >
< start="111.86" dur="4.07"> ziintsuku ezingama-22 kuphela, kodwa uya kufumana abantu esele belinde ukuxoxwa kwetyala ixesha elide >
< start="115.93" dur="1.74"> iminyaka emihlanu. >
< start="117.67" dur="4.229"> Oku kusizisa kwenye yezona yunithi ziphambili, eyona ndawo iphambili kwezi zihloko >
< start="121.899" dur="1.151"> kwiimeko zayo zempatho-mbi. >
< start="123.05" dur="4.98"> Ibizwa ngokuba liZiko lokuGcinwa liTyala ngaphambi kwexesha, okanye ngamanye amaxesha libizwa ngokuba yi-Main Jail. >
< start="128.03" dur="3.34"> Ihlala ihlala malunga nabantu abayi-1,700 ngexesha. >
< start="131.37" dur="3.83"> Uninzi lwabantu abalapho basesebuchwephesha ubuchwephesha oko kuba bengakhange bangqine >
< start="135.2" dur="2.77"> unetyala, kodwa ukulinda loo mhla wenkundla kungathatha iminyaka. >
< start="137.97" dur="3.96"> Akulula ukuzinza xa ulolu hlobo lwe-limbo, kwaye ukuba uhamba ngaphaya kweeseli >
< start="141.93" dur="2.89"> ezinye imigangatho uzakubona nje ukuba izinto azicwangciswanga. >
< start="144.82" dur="3.559"> Kukho amabanjwa athe ayeka nokulwa amatyala awo kuba efuna ukufumana >
< start="148.379" dur="3.781"> ngaphandle, abamsulwa okanye hayi, bafuna nje ukuya entolongweni. >
< start="152.16" dur="3.7"> Amagumbi amabi kakhulu kulapho abona bantu banetyala eliyingozi bagcinwa khona kwaye bakhona >
< start="155.86" dur="1.22"> imigangatho emihlanu nesithandathu. >
< start="157.08" dur="4.44"> Iiseli apha zihlala naphi na ukusuka kwi-15 ukuya kwi-25 yamadoda kwaye ngaphakathi kweli qela kukho >
< start="161.52" dur="1.249"> luhlobo lwabalawuli. >
< start="162.769" dur="4.382"> Njengabafana balapha bathanda ukuthetha kakhulu, kuyasinda kwezona zilungileyo, ke ukuba awukho >
< start="167.151" dur="2.599"> umlo usenokuba nobunzima. >
< start="169.75" dur="2.6"> Ufuna ibhedi ethile, kuya kufuneka uyilwele. >
< start="172.35" dur="3.49"> Kulungile, awukhathali malunga nokuba yeyona ndawo imbi kakhulu esiseleni, kodwa uza kuthini ukuba umntu nje >
< start="175.84" dur="1.02"> ithatha izinto zakho? >
< start="176.86" dur="2.599"> Njengoko elinye ibanjwa lathi, "Ndixhaphaza ababuthathaka." >
< start="179.459" dur="3.691"> Ukuba awuzilweli izinto zakho uya kuba nesihogo sexesha, kwaye oko kuthetha ukuba >
< start="183.15" dur="1.19"> ezingalunganga. >
< start="184.34" dur="4.72"> Ukuba uyahlwaywa, uyakubethwa naphina apho uya khona ngaphandle kokokuba ukhuselekile. >
< start="189.06" dur="3.899"> Njengoko elinye ibanjwa lithe kudliwanondlebe kusuku lwakho lokuqala kwisisele sakho kuya kufuneka ukuba ulwe >
< start="192.959" dur="2.301"> kuba bafuna ukukujonga njengendoda. >
< start="195.26" dur="1"> Kodwa kutheni? >
< start="196.26" dur="3.38"> Impendulo yakhe ibikukuba awulwi luphawu lokuba kukho into ephosakeleyo ngawe. >
< start="199.64" dur="2.269"> Mhlawumbi usisithukuthezi, kuba ubungafuni kulwa. >
< start="201.909" dur="4.151"> Kuyavakala ukuba ayinangqondo, kodwa ibanjwa lathi le yimigaqo, yile khowudi. >
< start="206.06" dur="4.04"> Into yile, amabanjwa akanakuze ayicacisa gca imigaqo yekhowudi. >
< start="210.1" dur="4.67"> Omnye umntu uchaze ukuba ukuba umntu akabalwi aba- nye emva kokuthobela i >
< start="214.77" dur="2.87"> ikhowudi iseli yonke inokubetha loo mntu. >
< start="217.64" dur="3.33"> Ngamanye amaxesha umntu unokubhaqwa ngenxa yesiphosiso esincinci, kwaye ngamanye amaxesha angabakho >
< start="220.97" dur="2"> otyholwa ngento angayenzanga. >
< start="222.97" dur="1.5"> "Ubani ubiwe ukutya kwam?" >
< start="224.47" dur="3.03"> Akukho mntu uphendulayo, kwaye obuthathaka uthatha ukubetha. >
< start="227.5" dur="1.849"> Awunamandla, uthatha ityala. >
< start="229.349" dur="2.851"> Kwakufuneka ayenzile, kuba uyakuphulukana nobuso ukuba akakwenzi. >
< start="232.2" dur="2.7"> Njengoko wonke umntu esitsho apha, kufuneka ulwe umva. >
< start="234.9" dur="4.039"> Banemigaqo emininzi engabhalwanga abayamkelayo, kwaye enye ibizwa ngokuba yi-GABOS. >
< start="238.939" dur="3.281"> Oko kuthetha ukuba, "Umdlalo awusekelwanga kwi-Sympathy". >
< start="242.22" dur="3.82"> Ngokungafaniyo nezinye iintolongo zombuso, akunakwenzeka ukuba uya kuthathwa phantsi kwephiko lomntu. >
< start="246.04" dur="4.059"> I-Jail yindlela yokugcwala ngaphezulu kunejele, nangona siva kancinci malunga nokuba krwada >
< start="250.099" dur="1.081"> iinkqubo zejele. >
< start="251.18" dur="4.01"> Yiya nje kwiiforamu apho ababesakuba ngamabanjwa bathetha ngamava abo kwizilungiso >
< start="255.19" dur="3.53"> Inkqubo kwaye uya kufumana uninzi lwabo bathi intolongo yayiyimbi ngakumbi. >
< start="258.72" dur="4.55"> Isithukuthezi yile yokuba uninzi lwabantu alukafunyanwa linetyala, kwaye ke bayanyangwa >
< start="263.27" dur="2.01"> mbi kwaye ujongane nezisongelo ezingakumbi. >
< start="265.28" dur="4.35"> Amaxesha okuqala oyika ngokupheleleyo kwaye kwiimeko ezininzi kufuneka abe; ngengqondo >
< start="269.63" dur="4.68"> Thumela umthwalo ongalunganga apho; ukutya kukubi; iiseli zingcolile kwaye ziya kuchitha uninzi >
< start="274.31" dur="1.3"> yexesha labo kwisisele. >
< start="275.61" dur="3.36"> Ungafumana amabanjwa amaninzi esithi azakwenza “iibhulethini” ukuze aphume kuloo nto >
< start="278.97" dur="1"> isihogo. >
< start="279.97" dur="1.669"> Imbumbulu ngunyaka ejele. >
< start="281.639" dur="3.121"> Kutheni iijele zisekhaya kwiimeko ezimbi kakhulu, unokuzibuza. >
< start="284.76" dur="3.159"> Ewe, abenzelwanga ukuba bagcine umntu ixesha elide. >
< start="287.919" dur="4.191"> Ingxaki kukuba, nokuba yinqanaba elifutshane kunokubhengeza kwaye abanye abantu benze okungaphezulu kakhulu kuno-a >
< start="292.11" dur="2.149"> ukuhlala ixesha elifutshane ukuba ityala labo lilibazisekile. >
< start="294.259" dur="2.171"> Intolongo imele ukunika uhlobo oluthile lwentuthuzelo… >
< start="296.43" dur="4.72"> Intolongo isisihogo esinezibonelelo, ijele liva iintlungu ezingapheliyo kwiprigatoriyo kunye neyona ndawo imbi >
< start="301.15" dur="1.859"> awuyazi indlela yokuphuma. >
< start="303.009" dur="4.111"> Ngenxa yalonto, amabanjwa ahlala enoburharha, kwaye enomsindo, kwaye ekhathazekile, kwaye ngamanye amaxesha nje >
< start="307.12" dur="3.63"> icace gwenxa emva kokuba ibenesikhuhli-kwi-nyanga eyi-18. >
< start="310.75" dur="3.13"> Yonke lento uyithethayo, khawufane ucinge ukuba uthunyelwe kwelona xesha limbi kwezi ndawo? >
< start="313.88" dur="4.379"> Masibuyele kuwe sithathelwa phezulu kumgangatho we-6 eMiami. >
< start="318.259" dur="3.861"> Xa sele esiseleni unogada uhamba, kwaye abo nogada bavumile ukuba abanakuphendula >
< start="322.12" dur="2.03"> kugonyamelo ngokukhawuleza ukuba luyeke. >
< start="324.15" dur="2.57"> Bavumile ukuba babashiya amabanjwa ukuya kwiikhowudi zabo. >
< start="326.72" dur="3.6"> Abo bagadi bathi akukho nto banokuyenza kukubethwa kanobom, i >
< start="330.32" dur="1.37"> ukugwaza, ubusela. >
< start="331.69" dur="3.34"> Akwanelanga ukuba babe kuyo yonke indawo kwaye babone yonke into. >
< start="335.03" dur="4.17"> Nje ukuba umgadi ahambe, ushiywe ukuba uyokulwa kumgangatho wesi-5 nowesi-6 >
< start="339.2" dur="2.469"> esi sakhiwo sikhohlakeleyo sidala. >
< start="341.669" dur="1"> Kodwa kutheni? >
< start="342.669" dur="1.361"> Kutheni le nto bengavani nje? >
< start="344.03" dur="2.729"> Elinye ibanjwa laphendula lathi, "Ikhowudi yikhowudi." >
< start="346.759" dur="1.19"> Ithetha ntoni le nto? >
< start="347.949" dur="3.981"> Kuthetha ukuba ubonwa ungamhloniphi umntu olwayo, ubopha imitya. >
< start="351.93" dur="4.2"> Awuqiqi nomntu kuba le ayisiyondawo efanelekileyo yokuqala. >
< start="356.13" dur="4.349"> Abantu abangahlali ezitalatweni, bathi, abayiqondi ikhowudi yezitrato. >
< start="360.479" dur="3.681"> Olu hlobo lwasentshonalanga lwasentshona lubuyela kwinto abayibiza ngokuba "yinkcubeko." >
< start="364.16" dur="1"> Ngembeko. ” >
< start="365.16" dur="4.09"> Uyamhlazisa umntu obhinqileyo, uyalwa, urhola amakrele, uthabatha izithuba ezilishumi kwaye udubula. >
< start="369.25" dur="4.069"> Kwilizwe langaphandle siphume sivela koku uninzi, kodwa ngaphakathi ejele >
< start="373.319" dur="3.231"> Le khowudi, le nkcubeko yokuhlonipha, isasazekile. >
< start="376.55" dur="4.18"> Ngaphezulu kobusela kunye nokulwa neJail Jail eyintloko eMiami ebizwa ngokuba yenye yezona zimbi >
< start="380.73" dur="3.23"> eMelika zezolunye uhlobo lokuphathwa gadalala kwamadoda-kwindoda. >
< start="383.96" dur="3.84"> Izinto ezoyikisayo zinokwenzeka xa abalindi bejikeleza iiseli kube kanye ngeyure. >
< start="387.8" dur="3.54"> Amabanjwa angabom ashiywe njengamaxhoba phakathi kwabarhanisi. >
< start="391.34" dur="4.09"> Ngombulelo, ijele lenze utshintsho oluninzi kule minyaka imbalwa idlulileyo, enye kakhulu >
< start="395.43" dur="2.269"> kufakwe iikhamera. >
< start="397.699" dur="4.44"> Ke kukho umba wale ndlu yasejele abantu abaninzi abathatha iziyobisi ngengqondo. >
< start="402.139" dur="4.241"> Amabanjwa alwa ngokuxhaphakileyo xa umntu ogula ngengqondo esenza izinto ezibanjwa ngamanye amabanjwa >
< start="406.38" dur="1"> andithandi. >
< start="407.38" dur="3.88"> Njengoko iProjekthi kaMarshall inike ingxelo, "Inkqubo yaseMiami yejele lelona ziko likhulu >
< start="411.26" dur="1.7"> Abantu abagula ngengqondo eFlorida. ” >
< start="412.96" dur="4.42"> Abantu abagula ngengqondo bahlala bexhoba, kwaye baphelela phantsi ngamadoda angama-20 athabatha >
< start="417.38" dur="1.39"> ujika ubambe. >
< start="418.77" dur="2.23"> Yindlela yokunyanga ukuphathwa ngayo. >
< start="421" dur="2.58"> Ngalo naluphi na usuku umntu angena kwaye aphuma kwizigulana. >
< start="423.58" dur="2.25"> Kufana nomnyango ojikelezayo othe tyaba-gazi. >
< start="425.83" dur="4.18"> Ngapha koko, kuye kwakho ubundlobongela obuninzi kangangokuba iSebe lezoBulungisa lathi iMiami-Dade >
< start="430.01" dur="5.409"> Inkqubo yentolongo yayiphuma kulawulo kwaye amabanjwa ngokunjalo nabalindi bajongana neengozi ezininzi kakhulu. >
< start="435.419" dur="1.84"> Kukho into ekufuneka yenziwe, utshilo isebe. >
< start="437.259" dur="4.771"> Kwiminyaka embalwa ebuyayo ejele yajongwa kakhulu emva kokuba abantu abasibhozo besweleke kwiinyanga nje ezintlanu. >
< start="442.03" dur="5.1"> I-DoJ ithe ukubulawa kwabantu abathathu abangafundanga ngengqondo kuyaphazamisa. >
< start="447.13" dur="4.39"> Omnye umntu owayeqhuba etshayisa ngomnye wangena ngomgqibelo wabe efile olandelayo >
< start="451.52" dur="1"> UMvulo. >
< start="452.52" dur="3.869"> Ababini ngaphezulu basweleke kwiveki, kunye nekhomishini ethi le nkqubo “yaphuke kakhulu.” >
< start="456.389" dur="4.601"> Kwaye kwafumanisa ukuba ukusuka kwabasibhozo ababhubhileyo sele etsiyile indawo yokubaleka amabanjwa >
< start="460.99" dur="1.76"> eza emva kwakhe eza kumbetha. >
< start="462.75" dur="1.62"> Izikhuni zazikhankanyiwe. >
< start="464.37" dur="4.04"> Owona mgangatho umbi kakhulu, owawuvaliwe, ngamanye amaxesha wawubizwa ngokuba nguMgangatho oLityelweyo. >
< start="468.41" dur="3.979"> Yayikwinqanaba lesithoba apho uninzi lwabantu abagula ngengqondo babegcinwe khona. >
< start="472.389" dur="3.861"> Kulapho amabanjwa ayehlala eshiywe kwaye engakhathalelwanga, kwaye kwiimeko ezininzi kakhulu >
< start="476.25" dur="1.55"> ubomi bakho. >
< start="477.8" dur="3.92"> Emva kwemini kweli nqanaba amabanjwa ayelala phantsi ngaphandle kweengubo, nangona kunjalo >
< start="481.72" dur="2.91"> indawo yokufumana isifo sengqondo. >
< start="484.63" dur="3.759"> Amanye amabanjwa afunyanwa esela kwizindlu zangasese, kwaye xa oku kufikile ezindabeni >
< start="488.389" dur="1.24"> yabizwa, "yoyikeka". >
< start="489.629" dur="1.401"> Kwakukho isikhalo sasesidlangalaleni. >
< start="491.03" dur="3.65"> Kodwa njengoko uvile, kusekho iingxaki xa umntu onengxaki yengqondo etshixiwe >
< start="494.68" dur="5.84"> Abantu abakhulayo esitratweni banamhlanje nabanezigebenga ezinekhowudi ezingenabuntu. >
< start="500.52" dur="4.84"> Ayisiyo yonke imigangatho emibi njengamabali esiye sathetha ngawo, kwaye kwezinye iimeko ikakhulu >
< start="505.36" dur="2.81"> abantu abanobungozi okanye abasesichengeni baya kuhlala yedwa. >
< start="508.17" dur="4.24"> Nangona kunjalo, sigqibe kwelinye lala magumbi aphezulu kwijele enkulu kwaye uya kubona >
< start="512.41" dur="4.66"> kunjani ukuvalelwa kwenye yeentolongo ezinamandla emhlabeni. >
< start="517.07" dur="3.82"> Kukho ezinye iingxaki, nazo, ze-ilk engaqhelekanga. >
< start="520.89" dur="5.35"> Ngo-2019, abantu abayi-17 basiwa esibhedlele kule ndawo ngenxa yokugula ngesiquphe. >
< start="526.24" dur="1.76"> Iqela labasebenzi lehle nalo, nalo. >
< start="528" dur="1"> Kwenzekentoni? >
< start="529" dur="1.35"> Akukho mntu waziyo ngokwenene. >
< start="530.35" dur="3.66"> Iqela lebhombu lada labizwa emva kokuba kufunyenwe ulwelo olungaqhelekanga, kodwa lwajika >
< start="534.01" dur="1.09"> ukungabi nabungozi. >
< start="535.1" dur="4.23"> Esona sizathu siphambili sokuba abantu baqalise ukugxuphuleka yayingumsi wetyhefu >
< start="539.33" dur="1"> iziyobisi. >
< start="540.33" dur="3.75"> Ukuba ukuphefumla umsi okuvela kude kungamthoba umntu ukuba abe nesicaphucaphu esikhohlakeleyo, >
< start="544.08" dur="2.24"> yintoni emhlabeni ababenokuthi bayatshaya apho? >
< start="546.32" dur="1"> Ngaba kukho irhasi? >
< start="547.32" dur="2.36"> Ibonisa nje ukuba injani indawo yendawo. >
< start="549.68" dur="4.37"> Siza kukushiya ngophononongo esilifumene kwiphepha le-Facebook elinikezelwe kule jele: >
< start="554.05" dur="1.12"> "Wamkelekile esihogweni. >
< start="555.17" dur="4.77"> Umntu angangcono xa efile kunokuba anyamezele ukuphathwa gadalala nokuthuthunjiswa kokubanjwa >
< start="559.94" dur="3.05"> kweli chibi licekeceke. >
< start="562.99" dur="4.21"> Awufuni ukuthumela kwi-Miami Jail kodwa ufuna ukunqakraza kwenye yezi >
< start="567.2" dur="1"> iividiyo. >
< start="568.2" dur="4.36"> Ke yiya kubukela le vidiyo ngoku kwenye ividiyo enkulu kwiThe infographics Show okanye le >
< start="572.56" dur="1"> ngaphaya apha. >
< start="573.56" dur="3.48"> Unokukhetha enye kuphela nangona kunjalo ukhethe ukuya kwenye ividiyo ngoku! >